.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Break My Heart Collection - VA [Album]
Break My Heart Collection - VA [Album]
ဒီနေ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ရှာရင်းနဲ့ ဒီ Album လေးကို တွေ့လို့ အကုန်ဒေါင်းပြီးတော့ နားထောင်ကြည့်ရင်း
သီချင်းလေးတွေကောင်းတာနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း ကြိုက်မယ်ထင်တာနဲ့ ပြန်ပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါ။
အောက်မှာ လိုင်းပေါ်မှာတင် နားထောင်လို့ရော ၊ ဒေါင်းယူလို့ပါ အဆင်ပြေအောင် ဆိုဒ်ချုံ့ပေးထားပါတယ်။
ဒေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့ သီချင်းလင့်ကို Right Click လုပ်ပြီး Save Link As.. ကိုနှိပ်ပါ။ အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
1 Break My Heart Pa South Click Here !! 1.90 MB
2 နင်မရှိတဲ့နေ့ Moony Kyaw feat. ဟိန်းထက် Click Here !! 2.20 MB
3 နင့်သဘောပါ ကျော်ဇင်လတ် feat. $kull Click Here !! 1.80 MB
4 နင်နေချင်သလို ထက်ယံ Click Here !! 1.80 MB
5 မရက်စက်ပါနဲ့ $treetz-G Click Here !! 2.50 MB
6 နင့်အလိုကျ အိမြတ် feat. ရွှေထူး Click Here !! 1.80 MB
7 Living Story စည်သူနှင်းမိုး Click Here !! 2.00 MB
8 Me Too ထက်ကို feat. မြတ်မွန် Click Here !! 1.50 MB
9 ဝေးညလေး Hemale Click Here !! 2.10 MB
10 အရိပ်လို တေဇ MC feat. Double Nyi | TG Click Here !! 2.40 MB
11 ငါ့ဘဝ Super Singer | ရတနာဖြူဖြူအောင် Click Here !! 1.90 MB
Credit - Mr.Ehlar
Posted by Thurainlin at 07:55